ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်း၊ iPhone သို့မဟုတ် Android ခိုးယူခံရလျှင် | Gadget သတင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android သို့မဟုတ် iOS စမတ်ဖုန်းခိုးယူခံရလျှင်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုရန်အဆင့်များ
Paco L ကို Gutierrez | | အန်းဒရွိုက်, Apple, ယေဘုယျ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ယနေ့ကြုံတွေ့နိုင်အဆိုးဆုံးအတွေ့အကြုံများ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းကောင်းများအတွက် (စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်မြင့်တက်လာခြင်း) သာမကကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အတွင်း၌ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးကောင်းကျိုးများအတွက်ပါပါ ၀ င်သည်။
ယင်းသို့ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းအမြဲတမ်းထိရောက်မှုမရှိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောဂရုစိုက်မှုနှင့်အာရုံစိုက်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ Google နှင့် Apple တို့က၎င်းစက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ကိရိယာအချို့ကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းအနည်းဆုံးမဖြစ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ဓာတ်ပုံများမှဘဏ်အကောင့်များ၊ လိပ်စာများသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအထိ။
1 မင်းရဲ့ iPhone အခိုးခံရတာဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးသွားတာလား။
1.1 ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone တွင် [ရှာဖွေမှု] ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်
1.2 ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone တွင် [ရှာဖွေမှု] ကိုဖွင့်ထားခြင်းမရှိပါ
2 မင်းရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့မဟုတ်ခိုးယူခံရသောစမတ်ဖုန်းသည် Android ဖြစ်သည်
မင်းရဲ့ iPhone အခိုးခံရတာဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးသွားတာလား။
ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့သောသို့မဟုတ်ခိုးယူခဲ့သည့်ပစ္စည်းသည်ပန်းသီးတံဆိပ်မှဖြစ်လျှင်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းငါတို့ "Search" option ကို activated ရှိသည်ဖြစ်စေမကွဲပြားလိမ့်မည်ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေ။ ၎င်းကိုအခြားပန်းသီးစက်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယ်တိုင်မှအဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။
ဒီရွေးစရာကိုဖွင့်ထားတာကရိုးရှင်းပါတယ်။ settings / Passwords နဲ့အကောင့်များ / iCloud / Search ကိုရိုက်ထည့်ရုံပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone တွင် [ရှာဖွေမှု] ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်
သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် ရှာရန်အက်ပ် သင်၏ကိရိယာကိုပြန်လည်ရယူရန်သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်ကာကွယ်ရန်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်။
Login လုပ်ပါ iCloud.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှရှာရန်အက်ပ်ကိုသုံးပါ။
သင့်စက်ကိုရှာပါ။ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းရှိရှာဖွေခြင်းအက်ပ်ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ် iCloud.com သို့ သွား၍ ရှာဖွေကိုနှိပ်ပါ။ မြေပုံပေါ်တွင်၎င်း၏တည်နေရာကိုတွေ့ရန်သင်ရှာဖွေနေသည့်ကိရိယာကိုရွေးချယ်ပါ။ အကယ်၍ ကိရိယာသည်အနီးအနားတွင်ရှိလျှင်၎င်းသို့မဟုတ်သင်သို့မဟုတ်အခြားသူက၎င်းကိုရှာရန်၎င်းကိုအသံထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ရှုံးနိမ့်သူအဖြစ်မှတ်သားပါ ကိရိယာကိုကုဒ်တစ်ခုနှင့်အဝေးမှသော့ခတ်လိမ့်မည် သော့ခတ်မြင်ကွင်းပေါ်တွင်ပေါ်လာမည့်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်စာကိုပြနိုင်သည် ပျောက်သို့မဟုတ်ခိုးယူစက်ကိရိယာ၏။ ကိရိယာ၏တည်နေရာကိုလည်းခြေရာခံလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် Apple Pay နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောခရက်ဒစ်ကဒ်များရှိပါကသင်ဆုံးရှုံးသွားသော mode ကိုသက်ဝင်သောအခါ၎င်းသည်ပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။
ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ခိုးမှုကိုအနီးဆုံးရဲသို့မဟုတ်လူထုအခြေပြုရုံးများသို့သတင်းပို့ပါ။ သူတို့ကသင့်အနေနှင့်သက်ဆိုင်ရာ terminal ၏ serial number ကိုတောင်းလိမ့်မည်။ Serial နံပါတ်ကိုမူရင်းထုပ်ပိုးမှု၊ ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ် iTunes တွင်သင်ချိတ်ဆက်မိပြီလားတွေ့နိုင်သည်။
ကိရိယာမှအကြောင်းအရာများကိုဖျက်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး အားကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုရယူခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအဝေးမှဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ အကုန်လုံးဖယ်ရှားပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏မှတ်ဉာဏ်ကိုလုံးဝဖျက်ပစ်သည်၊ ကဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအကောင့်များအားလုံးကိုဖျက်ပစ်သည်။ delete all option ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက် device သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိတော့မည်မဟုတ်တော့ပေ လျှောက်လွှာနှင့် iCloud ဝက်ဘ်တွင်ပါ အာရုံစူးစိုက်မှု! Delete content ကိုအသုံးပြုပြီးနောက် device သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ account မှဖယ်ထုတ်လိုက်ပါက terminal block သည်активတော့မည်မဟုတ်ပါ အခြားမည်သူမဆို terminal ကိုသက် ၀ င်ပြီးအသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။
သင်၏အခြေအနေကိုသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းအော်ပရေတာအားအကြောင်းကြားရန်၊ သင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းလိုင်း၏အသုံးပြုမှုကိုတားဆီး။ သင်၏အော်ပရေတာထံမှအာမခံအချို့ရနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဟာ Apple care + ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး၎င်းဟာခိုးမှု (သို့) ဆုံးရှုံးမှုကိုဖုံးကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်ဖုန်းအတွက်တောင်းဆိုမှုမှတ်တမ်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone တွင် [ရှာဖွေမှု] ကိုဖွင့်ထားခြင်းမရှိပါ
ကံမကောင်းတာက iPhone မှာဒီ option ကို activate မထားရင်အဲဒါကိုရှာလို့မရပါဘူးကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
သင်၏ Apple ID အတွက်စကားဝှက်ကိုပြောင်းပါ။ စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏တစ်စုံတစ် ဦး အားသင့်အချက်အလက်များကိုရယူခြင်းမှတားဆီးလိမ့်မည် iCloud သို့မဟုတ် ၄ င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုအသုံးပြုပါ။
သင်၏အကောင့်တွင်သင်သိမ်းဆည်းထားသောစကားဝှက်များကိုပြောင်းလဲပါ iCloud တွင်၎င်းသည်အွန်လိုင်းစတိုးများ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဟုတ်တွစ်တာများကိုသုံးနိုင်သည်။
[Search] မှလွဲ၍ အခြားကိရိယာကိုရှာရန်မည်သည့် application သို့မဟုတ် system ရှိပါသနည်းဟုသင်စဉ်းစားပါက။ ကံမကောင်းပါဘူး။
မင်းရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့မဟုတ်ခိုးယူခံရသောစမတ်ဖုန်းသည် Android ဖြစ်သည်
သင်ဆုံးရှုံးခဲ့သောသို့မဟုတ်အခိုးခံရသော terminal သည်အတွင်း၌ရှိလျှင် Android operating system, အခြားချိတ်ဆက်ထားသောစက်ကို သုံး၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သည် ဒီကိုရယူသုံး ဝဘ်လိပ်စာ. ဤဝဘ်လိပ်စာသည်သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသဖြင့်၎င်းကိုဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုရှာရန်ရွေးချယ်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တက်သည် ထို့ကြောင့်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းကိုသင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်ဤရွေးစရာကိုဖွင့်ခြင်းသည်ချိန်ညှိချက်များ / ဂူဂဲလ် / လုံခြုံရေး / ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်းကိုရယူခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်ဝင်ပါ ဒီထဲမှာရှိတဲ့ web browser ကနေ လိပ်စာ.
ငါတို့ရှာနိုင်သောမြေပုံတစ်ခုရလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်၏တည်နေရာအတိအကျဂူဂဲလ်ပလေးတွင်မြင်နိုင်သည်၊ ဤဆိပ်ကမ်းသည်ဖြစ်ပျက်ရန်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည် တည်နေရာကိုဖွင့်ထားတယ် နှင့်လည်း Find my device option ကိုဖွင့်ထားတယ်.
သင့်စက်ကိုရှာပါ။ Terminal နှင့်နီးပြီဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါက၊ terminal ကို5မိနစ်စတင်မြည်နိုင်အောင်ဤသည်« play sound »ဟုခေါ်သည် အသံတိတ်နေလျှင်ဖြစ်စေ၊
ကိရိယာကိုသော့ခတ်ပါ။ ဒီ option ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် Terminal ကို pin, ပုံစံသို့မဟုတ် password ဖြင့်သော့ခတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းနည်းလမ်းကိုဖန်တီးထားခြင်းမရှိပါက၊ ငါတို့အဝေးကနေဒီအချိန်မှာဖန်တီးနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းနံပါတ်နှင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စာတစ်စောင်ရေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပျောက်ဆုံးသွားလျှင်အမှု၌ငါတို့ထံသို့ပြန်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုဖျက်ပါ။ ဤနောက်ဆုံးနှင့်အစွန်းရောက်သောရွေးချယ်မှုသည်စက်ပစ္စည်းမှကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်သို့မဟုတ်အထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ အကြွေးဝယ်ကဒ်မှစကားဝှက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘရောင်ဇာသို့မဟုတ်အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏တက်ကြွသောကိရိယာကိုရှာဖွေရန်ရွေးချယ်စရာမရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ကိုနေရာ ချ၍ မရပါသို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူးဂဲလ်အကောင့် (သို့) အထိခိုက်မခံသောဒေတာများကို၎င်းတို့မှတားဆီးရန်အခြားရွေးချယ်စရာများရှိပါက။ ကျွန်ုပ်တို့ဂူးဂဲလ်အကောင့်၏စကားဝှက်ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲရမည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ဘဏ္dataာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမထိခိုက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အရေးကြီးသည်ဟုယူဆသောအရာအားလုံးဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ခိုးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအစီရင်ခံရန်ဘယ်တော့မှမနှင့် လိမ်လည်အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားရန်တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာကိုဆက်သွယ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်း၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ကျွန်ုပ်တို့၏ Android သို့မဟုတ် iOS စမတ်ဖုန်းခိုးယူခံရလျှင်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုရန်အဆင့်များ
Windows 10 စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း
Huawei MediaPad M6: ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့တက်ဘလက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ